ओलीका कुरैमात्र ठूला, मतपत्र समेत पट्याउन जानेनन्... !
ARCHIVE, POLITICS » ओलीका कुरैमात्र ठूला, मतपत्र समेत पट्याउन जानेनन्... !
भक्तपुर-देशको दोस्रो ठुलो दल तथा प्रतिपक्ष पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपाकिाल वडा नम्बर २ को बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका ओलीले मत खसाल्दा देखिएको मतपत्रको अवस्था हेर्दा भने उनलाई मतदाता शिक्षाको कमी रहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैपनि अन्य मतदाताहरुले अहिलेको मतपत्र जटिल भएको भनेर गुनासो गरेका छन् । धेरैजसो सर्वसाधारण मतदाताले भोगेको समस्या एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि भोगेको उनले मतपेटीकामा मतपत्र खसाल्दा खिचिएको फोटो हेर्दा देखिन्छ ।